ချင်းပြည်ရဲ့ မေ့မရနိုင်တဲ့ ဒီဇင်ဘာမိုးညတစ်ည – YANGON STYLE
မီးလင်းနေတဲ့မြို့က ရိဒ်ခေါဒါ အဲ့အထိလမ်းလျှောက်လာကြတာ
အမှတ်တရဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိကြမှာပါ။ ခရီးသွားတဲ့အမှတ်တရ။ အချစ်ဦးနဲ့အမှတ်တရ။ မိသားစု သူငယ်ချင်းနဲ့အမှတ်တရ အစုံပေါ့။ သဒ္ဓါဆို ခရီးပေါင်းများစွာ လူပေါင်းသောင်းခြောက် ထောင်နဲ့ ကြုံဖူးတော့ ပြောစရာအမှတ်တရတွေကအရမ်းများတယ်လေ။ အဲ့ထဲကမှ Tour Guide ဘဝမှာ အမှတ်တရဖြစ်ဆုံး ချင်းပြည်ခရီးစဉ်ရဲ့ အမှတ်တရလေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်လို့ပါ… အဲ့ဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရပေါ့ 2019/2020 New Year December 31 ချင်းပြည်မှာပေါ့။ TD နဲ့ချင်းပြည် ဆိုတာခွဲခြားလို့မရဘူးလေ။ အဲ့တုန်းက ချင်းပြည်မှာ တစ်လလောက်ကြာခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုပေါ့။ အဲ့တစ်ခေါက်က ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ကိုပါ ချင်းပြည်ကိုအလည်လာခဲ့ဖို့ ခေါ်လိုက်တယ်လေ။ ကားပေါ်မယ် မိန်းကလေးကြီး ၁၀ ယောက်။
ယောက်ကျားလေးဆိုလို့ ကားဆရာတစ်ယောက်ပဲ ပါခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးတွေပဲဆိုတော့ အရမ်းကိုပျော်စရာကြီးပေါံ့။ဒါပေမယ့် ကံဆိုးချင်တော့ ရိဒ်ရေကန်အသွားချင်းတောင်စတက်တဲ့အချိန် ဒီဇင်ဘာလကြီးမှာ မိုးတွေရွာချပါလေရော။ ချင်းတောင်ဆိုတော့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ မိုးမရွာထားတဲလမ်းတွေမှာသွားရင်တောင် ထမင်းကြမ်း အစာကြေတဲ့လမ်းတွေလေ။ အဲ့ဒီမှာ ဒုက္ခနဲ့လှလှစတွေ့ပါလေရော။ သူငယ်ချင်းတွေကို ချင်းပြည်ဘယ်လောက်လှကြောင်း ကြွားထားတဲ့ကိုယ်နဲ့ မိုးရွာလို့ လမ်းချော်ပြီး ကားပေါ်မှာ ကြောက်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းရယ် ကိုယ့်ဧည့်သည်တွေရယ်။ ခေါင်းခန်းမှာထိုင်ပြီး ဘုရားစာတွေရွတ် ခေါင်းခဲနေတဲ့ Guide မမ မိသဒ္ဓါရယ်။ ဘီးချော်ထွက်နေတဲ့ ရွှံ့လမ်းကွေ့ကြီးတွေရယ်။
စတွေ့ပါပြီ ချစ်လှစွာသော Happy New Year။ အဲ့လိုနဲ့ပဲ အကုန်လုံးကားပေါ်ကဆင်းလိုက် ဗွက်တောထဲ လမ်းလျှောက်လိုက်။ ချင်းတောင်တန်းပေါ်က ဗွက်လမ်းမှာ လမ်းလျှောက်ရတာလွယ်တယ်မထင်နဲ့နော်။ တောင်ဆင်း တောင်တက်တွေကလည်းရှိသေး။ ဝတ်ထားတဲ့ Coat အင်္ကျီတွေ အနွေးထည်တွေဆိုတာ ဖြူဖြူလှလှလေးတွေ။ အကုန်လုံး Korea ဆန်ရာကနေ အညာဆန်သွားကြတဲ့အထိပဲ။ ပုံမှန်ဆို ရိဒ်ရေကန်ကို ၄ နာရီဆိုရောက်တဲ့ ခရီး အဲ့နေ့က ၇ နာရီမှရောက်သွားတယ်လေ။ တစ်လမ်းလုံး ဘုရားစာရွတ် ကိုယ်စီးလာတဲ့ကားက ဆက်သွားလို့ မရတော့လို့ ရိဒ်က ကားကိုလာခေါ်ခိုင်း မှောင်ကြီးထဲ လမ်းတွေလျှောက်ရ အသည်းပုံရေကန်ဆိုတာ ဘယ်နားမှာမှန်းတောင်မသိရတဲ့အခြေအနေ။ ဗိုက်တွေဆိုလည်း ဆာလှပေါ့။ ဒုက္ခများစွာခံပြီး ည (၇) နာရီအတိမှာ ရိဒ်ရေကန်ကိုရောက်သွားကြပါပြီ။
Video Ss ယူထားလို့ ဝါးနေတာ
ဒါပေမယ့် အထုတ်အပိုးတွေတော့အတူတူ ပါမလာခဲ့ဘူး။ လူတွေအကုန်လုံးက ဗိုက်ဆာနေတော့ အထုတ်တွေသယ်ဖို့ခေါင်းထဲ မထည့်နိုင်ကြတော့ဘူးလေ။ ကားပေါ်ပဲထားခဲ့ကြတယ်။ ကဲ လာပါပြီ အဲ့လိုနဲ့ ခရီးတစ်ခုလုံးကိုဦးဆောင်လာခဲ့တဲ့ မိသဒ္ဓါရဲ့ အဆိုးရွားဆုံးသောအမှတ်တရ။ ပါလာတဲ့ဧည့်သည်အဒေါ်ကြီးတွေက အထုတ်တွေကိုယူခိုင်းတယ်လေ။ ကားလာမှာပေါ့ စောင့်ဆိုတာကိုမစောင့်နိင်ကြဘူးဆိုတော့လည်း။ ကဲ မတတ်နိုင်ဘူး ညလဲ ၈ နာရီထိုးပြီ။ ဖုန်းလိုင်းတွေကလည်းမမိ ဘလောက်ပဲမိန်းကလေးဆိုပေမယ့် ဧည့်သည်တွေစိတ်ခုသွားရင် ကိုယ့်ကြောင့် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ရိဒ်ခေါဒါမြို့နယ်ခံကယ်ရီသမားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီး ဟိုအဝေးကတောင်ပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကားဆီ ခရီးနှင်ရပါတော့တယ်။ အဲ့အချိန်တုန်းက ကြောက်ရွံ့မှုကဘာနဲ့မှလဲလို့မရပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်မသိတဲ့နယ်ပယ်မှာ ကိုယ်မသိတဲ့ သူစိမ်းယောက်ကျား ဆိုင်ကယ်သမား။ မိုးရွာလို့ချော်နေတဲ့ စောက်မက်လှတဲ့ တောင်တက်တောင်ဆင်းလမ်း။ အချိန်က ည(၈) နာရီ။ ဖုန်းလိုင်းက ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပ….
အဆိုးဆုံးက ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားက မူးနေတယ်။ လမ်းမှာ ဘာအလင်းရောင်မှမရှိ။ တော တောင်ထဲမှာ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ နှစ်​ယောက်တည်း။ အော် အဖေနဲ့အမေသာသိရင် ဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ခွင့်ပေးပါတေ့ာမလားဆိုပြီး အခုချိန်ထိ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို မပြောဖြစ်သေး…… ပါလာတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကလည်း စိတ်တွေပူကြ။ သူတို့ကိုအဖော်ခေါ်ချင်ပေမယ့်လဲ အခုမှပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖူးတဲ့ နုနုညံ့ညံ့လေးတွေမို့ မခေါ်ရက်။ အဲ့လိုနဲ့ ဧည့်သည်တွေရဲ့ပြောသံတွေကြားကပဲ မိသဒ္ဓါရဲ့ သွားလေရာပါတဲ့ ဓားတစ်ချောင်းကို အနွေးထည်အိတ်ထဲ ထည့်ပြီး ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ကြောက်စိတ်ထက် ဧည့်သည်တွေအတွက် တာဝန်ယူစိတ်က ပိုပြင်းပြနေခဲ့တာကို….. လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်မီးပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆို တစ်တောလုံး တစ်တောင်လုံးမှာ ဆိုင်ကယ်သမားနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း။ အရက်နံ့ကလဲ ထောင်းလို့။ ဘုရားစာတွေကလဲရွတ် အမြန်ရောက်ပါစေ။ အမြန်ရောက်ပါစေဆိုပြီး။ အမှန်တော့ အရမ်းငိုချလိုက်ချင်ပြီ။ တနေကုန် ကိုယ်လဲအရမ်းပင်ပန်းနေပြီလေ …… ငိုခွင့်မရှိသေးတော့ ကိုယ့်ကားလေးဆီရောက်အောင်ပဲ ဘုရားတပြီးလာခဲ့ရတယ်။ ကားဆရာလဲ တောကြီးထဲမှာ ဘယ်လောက်များကြောက်နေလိုက်သလဲ။ ကိုယ်ရောက်လာတော့ သူ့ခမျာ ဟန်တောင်မဆောင်နိင်ဘူး။
သမုဒ္ဒရာထဲ မေခလာနတ်သမီးပဲတွေ့သလိုလို။ သူလဲကြောက်လို့ ကျောတွေ ချမ်းနေခဲ့တာတဲ့လေ။ ကိုယ်လဲ ကားနားရောက်မှ စိတ်ကိုတစ်ဝက်ချနိုင်တော့တယ်။ ကားလဲကောင်းပြီဆိုတော့ ၂ ယောက်သား ရိဒ်ကိုဆက်မောင်းလာခဲ့တော့တယ်။ အဲ့တော့မှ ဧည့်သည်တွေလဲအမြင်ပြန်ကြည်လာတော့တယ်။ ရောက်ပီဆိုလို့ နားရမယ်မထင်နဲ့နောိ Service ထဲမှာပါတဲ့ မီီးပုံပွံအတွက် တစ်ယောက်တည်းပြင်ဆင်ရသေးတယ်။ အဲ့နေ့က ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံး ဖြတ်ပစ်ချင်လောက်အောင်ကို ညောင်းနေပြီ။
အောင်မြင်စွာ ရောက်သွားကြတဲ့ မိန်းကလေး ဆယ်ယောက်
တကယ်အမှတ်တရပါ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို ခေါ်သွားတဲ့အလှည့်ကျမှဖြစ်တော့ စိတ်လဲမကောင်းဘူး။ ပိုက်ဆံရှိရင် အကုန်လုံးကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ခေါ်သွားချင်သေးတယ်…….တစျခြို့အကွောငျးအရာအဖွစျပကြျတှကေ ရှောငျလှှဲလျို့မရအောငျ မထငျမှတျထားတဲ့အခြိနျမှာ ဖွစျပေါျလာတတျတာမို့ မမေ့နိုငျလောကျတဲ့ အမှတျတရအဖွစျနဲရငျထဲအမွဲစှဲနတေော့တယျလေ…. ပုံလေးတွေကတော့ ရှိတာလေးတွေပဲထည့်ပေးထားတယ်။ အဲ့တုန်းက ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အဲ့လောက်မတွေးနိုင်ခဲ့တော့။ သဒ္ဓါလိုမျိုး ခရီးသွားရင်း မမေ့နိုင်တဲ့ အမှတ်တရတွေရှိရင်လည်း Comment မှာရေးသွားပေးပါဦးနော်။